China LED table Lamp miaraka amin'ny Wireless Charger, USB charging port Manufacturing and Factory |Chaoqun
1, manana seranan-tsambo USB sy charger tsy misy finday.Midika izany fa afaka manefa fitaovana roa ianao ary mampiasa ny jiron'ny birao hiasa amin'ny fotoana iray ihany. Fomba maoderina kanto miaraka amin'ny hazavana miavaka, ity jiron'ny biraon'ny andro voajanahary ity dia tsara tarehy toy ny asany.Tena mandaitra, ity jiro LED desk ity dia manana sandry malefaka, ahafahana manitsy mora araka izay ilainao.
2, Atsaharo ny jiro amin'ny fanaraha-maso mikasika, ary manjavozavo miaraka amin'ny dimmer tsy misy stepless. Ny fiasan'ny dimming stepless dia ahafahanao manatsotra ny dingana.Ny jiron'ny latabatra dimmable dia afaka manitsy ny famirapiratana eo anelanelan'ny 10% sy 100%.Ampiasao ny mamiratra indrindra ho an'ny asa ao amin'ny biraonao ary ny ambany indrindra ho an'ny toe-tsaina mahafa-po.3000k-4500k-6000k 3 loko hazavana azonao isafidianana, mavo mafana-fotsy mafana-fotsy mangatsiaka.Tadidiny ny fametrahana ny jironao alohan'ny hamonoana azy.Mora kokoa sy malefaka kokoa ny miasa.
3. Ny jiro jiro dia mamiratra sy mahazo aina toy ny hazavana voajanahary, mamorona toerana tsy tsara ho an'ny famakiana sy fanoratana.Ny habaka misy hazavana ampy dia mamiratra kokoa, ary ny maso dia tsy miasa rehefa mijery zavatra.
4, 50000h fiainana, SMD LED jiro, angovo mitsitsy.15 Watts LED blub dia mazava tsara, dia mihoatra lavitra ny angovo mandany halogen, compact fluorescent (CFL) na incandescent takamoa.Mitahiry vola sy angovo, ampy haharitra an-taonany maro tsy mila soloina.
5, TAONA 1 TAONA ANTOKO: Mijoro am-pireharehana ao ambadiky ny vokatray rehetra izahay 100% ary manome antoka feno 1 taona.Raha sendra olana momba ny kalitaon'ny vokatra ianao mandritra ny fampiasana, azafady mba mifandraisa aminay, hanana mpiasa matihanina aorian'ny varotra izahay hamaly anao, hanampy anao hamaha ny olana.
Boaty mailaka volontany namboarina: 29 * 18.5 * 36CM
Jiro ho an'ny biraonao, famakiana, DIY, sns. Jiro azo zahana mifanaraka amin'ny filan'ny sehatra samihafa.
teo aloha: Jiro latabatra LED klasika ho an'ny famakiana
Jiro fanamafisam-peo azo zahana
Jiro fanamafisam-peo azo zahana notarihina miaraka amin'ny clamp
Jiro latabatra Art Deco
Jiro latabatra amin'ny fandriana
Jiro latabatra Clamp
Jiro latabatra karazana Clip
Jiro latabatra Led dimmable
Jiro latabatra maoderina
Jiro latabatra sisiny
Jiro Clamp Table
Jiro latabatra ho an'ny efitra fandraisam-bahiny
Jiro latabatra fotsy
Jiro latabatra Wireless Charing